Buy Long Sleeve V-neck Sequined Mother & Daughter Matching Pink Dress - Free Shipping & No Tax | WoopShop®
गोपनीयता संग किन्नुहोस् अचम्मको कुरा पत्ता लगाउनुहोस्
हाम्रो भण्डार खोज्नुहोस्
महिलाहरु को फैशन
सामान र घडिहरु
झोला र वालेटहरू
बच्चा र बच्चाहरु
फेसन मेल खाउँछ
स्वास्थ्य र सौन्दर्य
ग्याजेटहरू र सहायक उपकरणहरू
घर र भान्सा
★ विश्वभरि निःशुल्क शिपिंग
♥ 99% शुभ वूपर्स
V भ्याट् शुल्क छैन
लामो बाहुला V- गर्दन Sequined मदर र डेटि मिलाउन गुलाबी पोशाक
$ 27.99 नियमित मूल्य $ 40.99
रंग SLL-B (वायोलेट) SLL-B (गुलाबी) SLL-A
आकार आमा XL केटी 2-YY आमा M आमा L आमा एस केटी 3-YY केटी 4-YY केटी 6-YY केटी 8-YY
SLL-B (Violet) / Mom XL SLL-B (Violet) / केटी 2-3Y SLL-B (Violet) / Mom M SLL-B (Violet) / Mom L SLL-B (Violet) / Mom S SLL-B (गुलाबी) / केटी Y-YY SLL-B (गुलाबी) / केटी Y-YY SLL-B (गुलाबी) / केटी Y-YY SLL-B (गुलाबी) / केटी Y-YY SLL-B (गुलाबी) / केटी Y-YY SLL-B (गुलाबी) / माँ XL SLL-B (गुलाबी) / आमा एम SLL-B (गुलाबी) / Mom L SLL-A / केटी 2-3Y SLL-A / केटी 3-4Y SLL-A / केटी 8-9Y SLL-B (गुलाबी) / आमा एस SLL-A / केटी 4-5Y SLL-A / केटी 6-7Y SLL-A / Mom L SLL-A / Mom XL SLL-A / Mom S SLL-A / Mom M SLL-B (Violet) / केटी 6-7Y SLL-B (Violet) / केटी 8-9Y SLL-B (Violet) / केटी 3-4Y SLL-B (Violet) / केटी 4-5Y
मात्रा 1234567 8910 + मात्रा
Long Sleeve V-neck Sequined Mother & Daughter Matching Pink Dress - SLL-B (Violet) / Mom XL backordered छ र यो शेयर मा फिर्ता छ रूपमा चाँडै जहाज हुनेछ।
ट्विटर मा शेयर
विश्वास संग किन्नुहोस्
उत्पाद तथ्या .्क
☑ विश्वव्यापी निःशुल्क शिपिंग।
☑ कुनै कर शुल्क छैन।
☑ उत्तम मूल्य ग्यारेन्टी।
You फिर्ता रकम यदि तपाईं आफ्नो अर्डर प्राप्त गर्नुहुन्न।
☑ फिर्ताको र वस्तु राख्नुहोस्, यदि वर्णन गरिएको छैन भने।
वस्तु प्रकार: कपडा
आस्तीन लम्बाई (सेमी): पूर्ण
फिट: आकारको लागि सही फिट हुन्छ, तपाईंको सामान्य आकार लिनुहोस्
नमूना प्रकार: ठोस
विभाग नाम: आमा र छोरी
मौसम: वसन्त, शरद
वूपशप ग्राहकहरूले ट्रस्टपिलटमा उनीहरूको सकारात्मक अनुभव साझा गरे।
यसको लागि हाम्रो शब्द लिनुहोस्
पूर्ण फिर्ती फिर्ता यदि तपाइँ तपाइँको अर्डर संग खुशी छैन
51 समीक्षाहरूमा आधारित
एउटा समीक्षा लेख्नुहोस्
सबै ठिक छ!
more beautiful than expected!! and quality is really good! I'm aroundaUK size 12, pear shaped, so got an L after looking at reviews, but think thataM would have been fine.
beautiful and great quality arrived withinaweek
Dress, as in the photo. Beautiful.
कुनै स्पाम छैन। केवल कुपनहरू, महान सम्झौताहरू, छुट र अधिक बचत।
इ - मेल ठेगाना
WoopShop: अनलाइन शपिंग र थोक को लागी परम साइट। थोक सबै उत्पादनहरु को लागी समर्थित छ। कृपया हामीलाई थोक किनमेल जस्तै कपडा थोक, ग्याजेटहरु थोक, स्वस्थ थोक, सौन्दर्य थोक, फैशन थोक, आदि को लागी सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाइँ पुरुषहरु, महिलाहरु, र बच्चाहरु को लागी अनलाइन शपिंग को सबै भन्दा राम्रो अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ सही ठाउँ मा हुनुहुन्छ। वूपशप फेसन र जीवनशैलीको लागि अन्तिम गन्तव्य हो, कपडा, फुटवेयर, सामान, गहनाहरू, व्यक्तिगत हेरचाह उत्पादनहरू र अधिक सहित व्यापारको विशाल सरणीको होस्ट हुँदैछ। यो समय को लागी तपाइँको शैली कथन को ट्रेंडी आइटम को खजाना को साथ परिभाषित गर्न को लागी हो। हाम्रो अनलाइन स्टोरले तपाइँलाई नयाँ डिजाइनर उत्पादनहरूमा सिधा फेसन हाउसहरू बाहिर ल्याउँछ। तपाईं आफ्नो घरको आरामबाट वूपशपमा अनलाइन शपिंग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको मनपर्ने कुरा तपाईंको घरको ढोकासम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। सर्वश्रेष्ठ अनलाइन शपिंग साइट र शीर्ष ई-कमर्स एप फेसनको लागि यो लुगा, जुत्ता वा अन्य सामानहरू, वूपशपले तपाईंलाई फेसनको आदर्श संयोजन प्रदान गर्दछ र पुरुष, महिला, र बच्चाहरूको लागि कार्यक्षमता। तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि आकाश सीमा हो जब तपाईं आउटफिट्सका प्रकारहरूमा आउँनुहुन्छ जुन तपाईं विभिन्न अवसरहरूमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। स्मार्ट पुरुषको कपडा - वूपशपमा तपाईं स्मार्ट अनौपचारिक शर्ट र ट्राउजरमा कूल टी-शर्ट र जीन्समा असंख्य विकल्पहरू पाउनुहुनेछ, वा पुरुषहरुका लागि कुर्ता र पायजामा संयोजन। छापिएको टी-शर्टको साथ तपाईंको दृष्टिकोण लगाउनुहोस्। विश्वविद्यालय टी-शर्ट र विचलित जीन्सको साथ फिर्ता-क्याम्पस vibe सिर्जना गर्नुहोस्। यो जिing्गम, भैंस वा विन्डो-फलक शैली, चेक गरिएको शर्टहरू अपराधी स्मार्ट छ। चिनोहरू, कफ गरिएको जीन्स वा क्रप गरिएको ट्राउजरहरूको साथ स्मार्ट क्याजुअल लुकको लागि उनीहरूको साथ टोली बनाउनुहोस्। बाइकर ज्याकेटको साथ एक स्टाइलिश स्तरित लुकको लागि अप्ट गर्नुहोस्। बादल मौसममा पानी प्रतिरोधी ज्याकेटहरूमा साहसका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। सहयोगी कपडा खोज्नको लागि हाम्रो भित्री पोशाक मार्फत ब्राउज गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई कुनै पनि पोशाखमा विश्वस्त बनाउँछ। ट्रेंडी महिला कपडा - वूपशपमा महिलाहरूको लागि अनलाइन शपिंग एक मुड-उन्नत अनुभव हो। हिप हेर्नुहोस् र यस गर्मीमा चिनो र छापिएको सर्टहरूसँग सहज रहनुहोस्। तपाइँको मितिमा अलि अलि कालो पोशाकमा तातो हेर्नुहोस्, वा सेसी वाइबका लागि रातो कपडा छान्नुहोस्। धारीदार पोशाक र टी-शर्टहरूले समुद्री फेसनको क्लासिक भावना प्रस्तुत गर्दछ। Bardot, अफ-शोल्डर, शर्ट-शैली, blouson, कढ़ाई र peplum माथिबाट तपाईंको मनपर्नेहरू छनौट गर्नुहोस्, केही नामहरू बनाउनको लागि। पातलो-फिट जीन्स, स्कर्ट वा पलाज्जोसको साथ उनीहरूको साथ टोली बनाउनुहोस्। कुर्तिस र जीन्सले उत्तम शहरीका लागि उत्तम फ्यूजन-पोशाक संयोजन बनाउँदछन्। हाम्रो भव्य साडी र लेहेंगा-चोली चयन विवाहको रूपमा ठूलो सामाजिक घटनाहरूमा एक छाप पार्न सही छन्। हाम्रो सलवार-कमिज सेट्स, कुर्ता र पटियाला सूटहरूले नियमित पोशाकका लागि सहज विकल्पहरू बनाउँदछन्। हामी तपाईं लाई स्नीकर र लोफर जस्ता पुरुषहरूका लागि आकस्मिक जुत्तामा विकल्पहरूको एक विशाल लाइनअप ल्याउँछौं। ब्रुगहरू र ऑक्सफर्ड्स लगाएर काममा पावर स्टेटमेन्ट बनाउनुहोस्। पुरुष र महिलाका लागि दौडिने जुत्ताको साथ तपाईंको म्याराथनको लागि अभ्यास गर्नुहोस्। टेनिस, फुटबल, बास्केटबल र मनपर्ने जस्ता व्यक्तिगत खेलहरूका लागि जुत्ताहरू छनौट गर्नुहोस्। वा क्यान्डल शैली र स्यान्डल, स्लाइडर, र फ्लिप-फ्लप द्वारा प्रस्ताव आराम। पम्पहरू, एडी बुटहरू, वेज-हिलहरू, र पेन्सिल-हिलहरू सहित महिलाहरूका लागि हाम्रो फेशनबल फुटवेयरको लाइनअप अन्वेषण गर्नुहोस्। वा सज्जित र धातु फ्ल्याटहरूको साथ उत्तम आराम र शैलीको मजा लिनुहोस्। स्टाइलिश सामान - वूपशप उत्तम उत्कृष्ट अनलाइन शपिंग साइटहरू मध्ये एक हो जुन उत्तम पोशाकहरूको लागि पूरक हुन्छ। तपाईं स्मार्ट एनालग वा डिजिटल वाचहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई बेल्ट र सम्बन्धहरूको साथ मिलाउन सक्नुहुन्छ। विशाल आवश्यक झोलाहरू, ब्याकप्याकहरू, र वालेटहरू लिनुहोस् शैलीमा आफ्ना आवश्यक सामानहरू भण्डारण गर्न। चाहे तपाईं न्यूनतम गहना वा भव्य र स्पार्कलिंग टुक्राहरू रुचाउनुहुन्छ, हाम्रो अनलाइन गहना संग्रहले तपाईंलाई धेरै प्रभावशाली विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। फन र फ्रोलिक - वूपशपमा बच्चाहरूको लागि अनलाइन शपिंग पूर्ण आनन्द हो। तपाईंको सानो राजकुमारीले विभिन्न प्रकारका राम्रा लुगाहरू, ब्यालेरिना जुत्ताहरू, हेडब्यान्डहरू, र क्लिपहरू माया गर्न गइरहेको छ। हाम्रो अनलाइन स्टोरबाट खेलकुदका जुत्ताहरू, सुपरहीरो टी-शर्टहरू, फुटबल जर्सीहरू र अरू धेरै पनि उठाएर तपाईंको छोरालाई खुसी पार्नुहोस्। हाम्रो खेलौनाहरूको लाइनअप जाँच गर्नुहोस् जुन तपाईं मायालु कुराको लागि सम्झनाहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरु हुन्छ - तपाईं पनि ताजा गर्न सक्नुहुन्छ, कायाकल्प गर्न सक्नुहुन्छ र वूपशपबाट सुन्दर छालाको व्यक्तिगत हेरचाह, सौन्दर्य र कोरेडिंग उत्पादनहरू सहित प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो साबुन, नुहाउने जेल, छाला हेरचाह क्रीम, लोशन, र अन्य आयुर्वेदिक उत्पादनहरू विशेष बुढेसकालको प्रभावलाई कम गर्न र आदर्श सफा गर्ने अनुभव प्रस्ताव गर्नको लागि बनाइएको हो। तपाईको स्क्याल्प सफा राख्नुहोस् र तपाईको कपाल ओम्बर-स्टाइलिश शैम्पू र कपाल हेरचाह उत्पादनको साथ। मेकअप छनौट गर्नुहोस् तपाइँको प्राकृतिक सौन्दर्य बृद्धि गर्न को लागी। WoopShop संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोप मा सबै भन्दा राम्रो अनलाइन शपिंग साइटहरु मध्ये एक हो जुन तपाइँको बस्ने ठाउँ लाई पुरा तरिकाले रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंको ओछ्यानमा सुत्ने र पर्दाको साथ र color्ग र व्यक्तित्व थप्नुहोस्। तपाईंको पाहुनाहरूलाई प्रभाव पार्न स्मार्ट टेबलवेयर प्रयोग गर्नुहोस्। भित्ता सजावट, घडीहरु, फोटो फ्रेम, र कृत्रिम बिरुवाहरु तपाइँको औँलाहरु मा आफ्नो घर को कुनै पनी कुनामा जीवन सास पक्का गर्न को लागी पक्का छन्। WoopShop संसार मा अद्वितीय अनलाइन शपिंग साइटहरु मध्ये एक हो जहाँ फैशन सबै को लागी सुलभ छ। नयाँ डिजाइनर लुगा, जुत्ता, र बजारमा सामान हेर्न हाम्रो नयाँ आगमनहरू जाँच गर्नुहोस्। तपाइँ लगाम मा प्रत्येक मौसम फैशनेबल शैली मा तपाइँको हातहरु को लागी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ सबै उत्सव अवसरहरुमा जातीय फैशन को सबै भन्दा राम्रो को लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं फुटवेयर, ट्राउजर, शर्ट, ब्याकप्याक्स र अधिकमा हाम्रो मौसमी छुटबाट प्रभावित हुन निश्चित हुनुहुन्छ। मौसम को अन्त्य को अन्तिम अनुभव हो जब फैशन अविश्वसनीय सस्तो हुन्छ। पूर्ण विश्वास संग WoopShop मा अनलाइन पसल। अर्को कारण किन WoopShop सबै अनलाइन स्टोरहरु को सबै भन्दा राम्रो छ कि यो सुविधा प्रदान गर्दछ। तपाईं आफ्नो मनपर्ने ब्रान्ड एकै स्थानमा बिभिन्न उत्पादनहरूका लागि मूल्य विकल्पहरूको साथ हेर्न सक्नुहुनेछ। एक प्रयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस तपाइँको छनौट प्रक्रिया को माध्यम बाट मार्गदर्शन गर्दछ। विस्तृत आकार चार्ट, उत्पादन जानकारी र उच्च-रिजोलुसन छविहरूले तपाईंलाई उत्तम खरीद निर्णयहरू गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंसँग तपाईंको भुक्तानी विकल्पहरू छनौट गर्न स्वतन्त्रता छ, यो कार्ड वा नगद-डेलिभरी हुन। १--दिनको रिटर्न नीतिले तपाईंलाई खरिदकर्ताको रूपमा बढी शक्ति दिन्छ। थप रूपमा, छनौट उत्पादनहरूको लागि प्रयास र खरीद विकल्पले ग्राहक-मित्रतालाई अर्को चरणमा लैजान्छ। परेशानी-मुक्त अनुभवको मजा लिनुहोस् जब तपाईं आफ्नो घर वा तपाईंको कार्यस्थलबाट आरामसँग किनमेल गर्नुहुन्छ। तपाइँ आफ्नो साथीहरु, परिवार र प्रियजनहरु को लागी पसल र विशेष अवसरहरु को लागी हाम्रो उपहार सेवाहरु को लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। Android | आईओएस
शिपिंग र वितरण
फिर्ती र फिर्ता नीति
गोपनीयता र सर्तहरू
कर्पोरेट सामाजिक दायित्व
एक सहयोगी बन्नुहोस्
बौद्धिक सम्पत्ती अधिकार रिपोर्ट गर्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार हावाफी समूह LLC 2021 २०२१ WoopShop®.
ग्राहकहरूले हामीलाई 4.9 /5दर गर्दछ 120423 समीक्षाहरूको आधारमा।
भुक्तानी विधिहरू स्वीकार गरियो
हाम्रो ग्राहकहरु हाम्रो लागि बोल्छन्
DIY गैर छडी राउन्ड सिलिकॉन फ्राइड अण्डा मोल्ड र प्यानकेक रिंग
धन्यवाद woopshop टीम
DHEA पाउडर शारीरिक फिटनेस र सुधार को लागी - स्वस्थ चयापचय र प्रतिरक्षा समारोह
क्यानाडा को लागी वितरण धेरै छिटो थियो। आइटम इथेनॉल वा आइसोप्रोपिल अल्कोहल (ट्रान्सडर्मल को लागी), वा भिटामिन ई संग वा बिना तातो तेल मा घुलनशील छ। धेरै नलिनुहोस् वा यो एस्ट्रोजेन मा परिणत हुनेछ। पेपैल को उपयोग सुविधाजनक छ त्यसैले म खुशी छु aliexpress यो प्रदान गर्दछ।